Mayur Times || मयूर टाइम्स || Authentic news from Nepal, Business Politics Society Art and many more ... » रियाका भाइ प’क्राउ परेपछि बुवाले भने : बधाई छ ! अब रियालाई पनि प’क्राउ गर ….
रियाका भाइ प’क्राउ परेपछि बुवाले भने : बधाई छ ! अब रियालाई पनि प’क्राउ गर ….
२०७७ भदौ २२ गते सोमबार ०२:५८
सुशान्त सिंह प्र’करणमा ड्र’ग मामिला अगाडि आएपछि रिया चक्रवर्तीका भाइ सौबिक चक्रवर्ती गि’रफ्तार भए। सौबिकको गि’रफ्तारीपछि रियाका पिता इन्द्रजीत चक्रवर्तीले आफ्नो ब’यान दिएका छ। ब’यानमा उनले अब गि’रफ्तार हुने पालो रियाको हो...
सुशान्त सिंह प्र’करणमा ड्र’ग मामिला अगाडि आएपछि रिया चक्रवर्तीका भाइ सौबिक चक्रवर्ती गि’रफ्तार भए। सौबिकको गि’रफ्तारीपछि रियाका पिता इन्द्रजीत चक्रवर्तीले आफ्नो ब’यान दिएका छ। ब’यानमा उनले अब गि’रफ्तार हुने पालो रियाको हो भनेका छन्।
भारतीय मिडिया आज तकको रिपोर्टका अनुसार, सुशान्त सिंह के’समा देखिएको ड्र’ग मामिलामा गि’रफ्तार भएका सौबिकका पिताले २४ वर्षका सौबिकको गि’रफ्तारीको निन्दा गरेका छन्। सौबिक ४ दिनका लागि एनसिबिको रि’मान्ड्मा छन्।
यस्तोमा सौबिकका पिताले व्य’ङ्ग्यको भाषामा एउटा बयान दिएका छन्, ” बधाइ छ भारत! देशभरिका सबै नागरिकहरूलाई सौबिक गि’रफ्तार भएकोमा धेरै धेरै शुभकामना। मलाई विश्वास छ, अब गि’रफ्तार हुने पालो रियाको हो। त्यसपछि थाहा छैन कसको पालो आउने छ। तपाईंहरूले प्र’भावपूर्ण तरिकाले एउटा म’ध्यमवर्गीय परिवारलाई ब’र्बाद गर्नुभयो। तर निश्चितरूपमा न्यायको लागि सबै जायज छ।”
यस्तो बयानपछि रि’याका पिता ट्रोलको सि’कार बनेका छन्।
प्रकाशित मिति २२ भाद्र २०७७, सोमबार १४:५८